Soo -saareyaasha Sheet Acrylic & Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadda Xaashida ee Shiinaha
Plexiglass Acrylic ayaa laga heli karaa Waraaqaha Cabbirka-La-jarjaray, Waraaqaha Buuxa, ama Qiyaasaha Aasaasiga ee Heerka ah. Xaashida Plexiglass waa dhaldhalaal, calaamado, waardiye hindhiso, daaqad ama shay muujiya oo xoog leh, qoyaan u adkaysta oo ka cad dhalada. Plexiglass sidoo kale wuxuu noqon karaa kuleyl-sameysan iyada oo aan lumin cad cad. Xaashidan akril-ka ahi waa kuwo dhaqaale leh, saamayn u adkaysan kara waxayna noqon karaan kuwo si qumman loo gooyo. Haddii aad u baahan tahay plexiglass, ha soo booqan Home Depot ama Lowes, wac “Xirfadle”. Waxaan si toos ah u goyn doonnaa xaashida xaashiyaha plexiglass albaabkaaga.
Waraaqaha Plexiglass waxay ku yimaadaan cabbirro iyo dhumucyo kala duwan. Astaamaha xaashida akril -ka waxaa ka mid ah: Adkaysi, hufnaan, tayo joogto ah, karti -u -lahaansho, iska caabin cimilada, khafiif iyo nabadgelyo, iska caabin UV, Iska -caabbinta Kiimikada iyo waxqabad aad u fiican. Xaashida akrilku waxay leeyihiin gudbinta iftiinka oo aad u fiican - way ka cad yihiin dhalada! Ma noqon doonto huruud ka dib soo -gaadhista qorraxda ee dheeraatay.
Plexiglass u adkaysta xoqan
Plexiglass -ka xoqan ee xoqan waxaa loola jeedaa plexiglass -ka oo leh adayg dusha sare ah, iska caabin xoqan. Astaamaha jir ahaaneed, sifooyinka farsamada, iyo iska caabbinta cimilada waxay la mid yihiin plexiglass -ka caadiga ah. Engegnaanta dusha sare, iska caabin xoqan, iska caabin xoqan, iyo kiimikada daxalka kiimikada.
1. Hufnaan dhammaystiran iyo gudbinta iftiinka oo leh 93%.
2. Dahaarka korontada oo aad u fiican, miisaankiisu aad u yar yahay.
3. Caagad sare, Ka shaqaynta iyo qaabaynta si sahlan.
4. Adkaanta dusha adag iyo cimilada wanaagsan ee iska caabinta hantida
5. Midab qurux badan, si sahlan loo nadiifin karo
1.Adeegyada macmiilka: bakhaarka fayadhowrka, alaabta guriga, qalabka xafiisyada, farsamada gacanta, loox kubbadda kolayga, shelf bandhigga, iwm
2.Advertising material: advertising logo calaamadaha, calaamadaha, sanduuqyada iftiinka, calaamadaha, calaamadaha, iwm
3.Qalabka dhismaha: hooska qorraxda, guddiga dahaarka codka (saxanka shaashadda codka), waab taleefan, quraaradda quraaradda, quraaradda, xaashida derbiga gudaha, hudheelka iyo qurxinta degaanka, nalalka, iwm
Meelaha kale: aaladaha indhaha, darfaha elektarooniga ah, iftiinka iftiinka, nalalka dabada baabuurka iyo muraayadda baabuurka ee kala duwan, farshaxannada gacanta, xardho, sabuuradda saxiixa iyo alaabta lagu ciyaaro iwm.
tayo sare leh oo looxyo akril ah oo cad
Gudiga looxa (Acrylic Panel) waa shay caag ah oo hufan oo leh awood aad u fiican, qallafsanaan, iyo cad cad. Xaashida akril-ka waxay soo bandhigaysaa sifooyin u eg muraayad-cad, hufnaan, iyo hufnaan-laakiin kala bar miisaanka iyo marar badan saamaynta iska caabbinta dhalada.
Xaashida Cad ee Acrylic waa ACRYLIC, oo sida badan loo yaqaan “xaashi plexiglass oo si gaar ah loo daweeyey”. Iyadu waa maaddo kiimiko ah. Magaca kiimikada waa "PMMA", oo iska leh khamriga propylene. Warshadaha dalabka, alaabta ceeriin akril ayaa guud ahaan u muuqda qaab walxaha, taargooyinka, tuubooyinka, iwm.
xaashi akril oo hufan
Waraaqaha Acrylic -ka ee cad waxay leeyihiin hufnaan aad u fiican, cad oo dhalaalaysa ka dib markii la safeeyey, gudbinta iftiinka ilaa 93.4% iska caabbinta cimilada wanaagsan iyo iska caabbinta heerkulka iyadoon hoos u dhicin oo caajisin;